Oke ego | December 2019
Chọpụta ọnụ ọgụgụ nke Wallets WebMoney
Usoro WebMoney na-enye onye ọrụ ohere ịnweta ọtụtụ wallets maka ego dị iche iche n'otu oge. Mkpa ịchọta ọnụ ọgụgụ nke akaụntụ ahụ e kere eke nwere ike ịkpata nsogbu, nke a ga-edozi. Chọpụta ọnụ ọgụgụ nke WebMoney purses WebMoney nwere ọtụtụ nsụgharị ozugbo, interface nke dị nnọọ iche.
Otu esi eji WebMoney
WebMoney bụ usoro nkwụnye ụgwọ eletrik kachasị ewu ewu na mba CIS. Ọ na-ekwu na onye nke ọ bụla nwere aka nke ha, na ya, e nwere otu akpa ma ọ bụ karịa (na ego dị iche). N'ezie, site n'enyemaka nke wallets ndị a, ngụkọta na-ewere ọnọdụ. WebMoney na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ maka ịzụta na Ịntanetị, kwụọ ụgwọ maka ọrụ na ọrụ ndị ọzọ na-enweghị ahapụ ụlọ gị.
Ụzọ atọ ị ga-esi banye obere akpa WebMoney
WebMoney bụ usoro mgbagwoju anya na mgbagwoju anya. Ya mere, ọtụtụ ndị ọrụ amaghị naanị otu esi abanye n'ime akpa ego WebMoney gị. Ọ bụrụ na ị gụọ ntụziaka na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ahụ, azịza nye ajụjụ ahụ ga-abụrịrị nghọtahie na mgbagwoju anya. Ka anyị nyochaa ụzọ atọ dị ugbu a iji tinye akpa nke onwe gị na WebMoney system.
Anyị na-enweta akwụkwọ WebMoney akwụkwọ iwu na nke onwe
Iji rụọ ọrụ niile n'ime usoro WebMoney, ị ga-enwerịrị akwụkwọ nkwado. Ọ na-enye gị ohere ịmepụta wallets, wepụ ma nyefee ego ma rụọ ọrụ ndị ọzọ. Iji nwetakwuo ohere, ị ghaghị inwe akwụkwọ nkeonwe. Ihe a nile mere nke oma na ngwa ngwa.
Nyefee ego site na WebMoney na kaadị Sberbank
Ndị ọrụ Russian nwere ike iji ọrụ nke WebMoney na Sberbank, Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị nyefee ego site na usoro mbụ gaa na kaadị nke abụọ nwere ike ịkpata ụfọdụ nsogbu. Ịnyefe ego site na WebMoney na kaadị Sberbank Tupu ị gaa n'ihu nyefe ego, ị ga-ekpebi usoro ego.
Nyefee ego n'aka Yandex.Money ka WebMoney
Ịgbanwe ego n'etiti usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche na - akpata nsogbu ọbụna maka ndị ọkachamara ahụmahụ. Ọnọdụ a dịkwa mkpa mgbe ị na-ebufe si Yandex obere akpa ka WebMoney. Anyị na-ebufe ego n'aka Yandex.Money ka WebMoney E nweghị ọtụtụ ụzọ isi gbanwee n'etiti usoro ndị a, a ga-atụlekwa isi ndị a n'okpuru.
Wepụ akaụntụ WebMoney ruo mgbe ebighị ebi
N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọrụ WebMoney na-ahọrọ ihichapụ akaụntụ ha. Dị ka ihe atụ, mkpa dị otú ahụ nwere ike ibili, ma ọ bụrụ na mmadụ ahapụ mba ọzọ ebe ejighi WebMoney. N'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ike ihichapụ WMID gị na ụzọ abụọ: site na ịkpọtụrụ ọrụ nchebe nke usoro ahụ na ịga na Asambodo Asambodo.
Ọ bụ ezie na a na-ewere WebMoney otu n'ime usoro kachasị mgbagwoju anya, ịnyefe ego site n'otu akaụntụ gaa na ọzọ dị mfe. Iji mee nke a, ọ ga-ezuru inwe akaụntụ na WebMoney usoro, yana inwe ike iji usoro WebMoney Keeper. Ọ dị na nsụgharị atọ: maka ekwentị / mbadamba na abụọ maka kọmputa.
Ndebanye aha n'ime WebMoney site na isi
WebMoney bụ otu n'ime usoro ndị kasị ewu ewu na-arụ ọrụ na ego kọmputa. Ọtụtụ freelancers na ndị ọchụnta ego na-eji ya gbakọọ ma nweta ego. N'otu oge ahụ, ịmepụta obere akpa na WebMoney dị mfe. Ọzọkwa, e nwere naanị otu ụzọ ịdebanye aha na WebMoney.
N'iji nịwi na ọrụ ịkwụ ụgwọ WebMoney
Mgbe ị na-ekepụta akpa e-akpa, ọ nwere ike isiri onye ọrụ ike ịhọrọ usoro ịkwụ ụgwọ kwesịrị ekwesị. Isiokwu a ga-eji WebMoney na Qiwi tụnyere. Tụlee Qiwi na WebMoney Ọrụ mbụ maka ịrụ ọrụ na ego kọmputa - Qiwi, nke e kere na Russia ma nwee ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu na mpaghara ya.
Ịnyefe ego n'agbata mgbokọta nke usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche na-akpata nsogbu ndị ọrụ. Nke a na-eme mgbe ị na-ebufe si WebMoney gaa Yandex Wallet. Ịnyefe ego site WebMoney ka Yandex.Money Ị nwere ike ịnyefe ego n'etiti usoro ịkwụ ụgwọ a n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụrụ naanị na ị chọrọ ịkwụsị ego site na akpa ego WebMoney, zoo aka n'isiokwu na-esonụ: Nkọwa: Anyị na-ewepu ego na WebMoney usoro Usoro 1: Ịnweta Akaụntụ
WebMoney bụ usoro nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na ego a kwadoro. Site na WebMoney ego n'ime ụlọ, ị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche: ha kwụrụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe, mejupụta obere akpa ma wepụ ha site na akaụntụ ahụ. Usoro a na-enye gị ohere ịdọrọ ego n'otu ụzọ ahụ iji tinye ha n'ime akaụntụ ahụ. Ma, ihe nke mbụ.
Bulite akaụntụ WebMoney
Enwere otutu uzo iji mechie obere akpa ego WebMoney. Enwere ike ime nke a na kaadị akụ, akara ndị pụrụ iche na ụlọ ahịa, akaụntụ ekwentị mkpanaaka na ụzọ ndị ọzọ. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ịghọta na ọrụ maka ịtụ ụgwọ ego ga-adị nnọọ iche, dabere na usoro a họọrọ.